“အတွေးစလေးတွေ”: ဘလော့ဂ်ဒေး ( တက်ဂ်ပို့စ် ) . . .
Posted by Han Kyi at 7:21:00 am
ဆရာဟန်ကြည်လဲ တော်တော်ဆိုးလာပြီ။ အခန်းဆက် အရှိန်ကို မသေသေးဘူး။ ကိုရင်ပေါက်စ ဘ၀တုန်းက ညစာခိုးစားရင်း ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးလာနေတာ မြင်လို့ စားချင်ရက်နဲ့ ဆက်မစားရတော့ဘဲ ရပ်ထားလိုက်ရသလို ဆန့်တငင်ငင်နဲ့။
အင်းးးးးးးးး တစ်နေ့ ၀ဋ်လည်လိမ့်ဦးမယ်။း))))
အင့် ဘုန်းကြီးလူထွက် သူကြီးမင်းလုပ်မှပဲ အားလုံးသိကုန်ပြီ ထင်ပါရဲ့။ ဒါနဲ့ မထူးတော့ဘူး ဆက်ပြောလိုက်ပါမယ်။ ညနေ ၀တ်တက်ခါနီးအချိန် ကိုရင်ကြီးတစ်ပါးက တို့စရာအဖြစ် ကန်စွန်းရွက်ခူးနေတုန်း စာချဘုန်းကြီးတစ်ပါးမြင်သွားတော့ ဘာလုပ်ဖို့လည်းမေးတော့ ကိုရင်ကြီးကလည်း ခေသူမဟုတ်ဘူးလေ ဒါနဲ့ ချက်ချင်းပြန်ဖြေလိုက်တာပေါ့။ ဘုရားပန်းအိုးလဲဖို့တဲ့။ ဒါကတော့ ရယ်စရာလေးတွေပါ။ အခန်းဆက်မျှော်နေမယ်နော်။ ဆရာနဲ့ ဆရာ့မဟေသီ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ...
ကေပီသရီးကတော့ ကျွန်တော်တို့လို အွန်လိုင်းကကြီးရေက
သမားများအတွက်တော့ တကယ့်ကို အားကိုးရာပါပဲဗျာ..။
အခန်းဆက်ဖြစ်သွားတော့လည်း ဆက်ရန်တွေကို မျော့နေ
အိမ်စာပြန်ပေးမယ်.. နောက်တစ်ခါ အပြီးရေးခဲ့.. မရေးခဲ့ရင် တုတ်စာမိမယ်.. :P.. ဟားဟား.. ဆရာဥိးဟန်ကြည်က အခန်းဆက်တွေ သိပ်ကြိုက်တယ်ထင်တယ်..း))). ပျော်ရွှင်စရာ ဘလော့ခ်ဒေးလေး ပိုင်ဆိုင်ပါစေ..
blogger ကပေးတဲ့ Template ခပ်တုံးတုံးတွေနဲ့နှစ်ပါးသွားခဲ့ရတယ်ဆို တာတိုက်ဆိုင်နေလို့ရယ်လိုက်ရသေးတယ် ဆရာဟန်ကြည်ရေ..။နောက်ဆက်တွဲ
ဟင်.... အခုထိ မပြီးသေးဘူးပေါ...အခန်းဆက်ဦးမပေါ့..လုပ်လိုက်လေ ကြာသလားလို့...ဟွင်းဟွင်း
21 ရာစုမျောက် ရွာသားလူလည် ကို(ဆရာ)ဟန်ကြည်ရယ်... ဘာမှ အားမငယ်နဲ့ ကျွန်တော်လည်း အခုထိ ပို့စ်ခေါက်တာ စမ်းသပ်လို့ မရသေးဘူး.... မီနူးတပ်ဘ်တွေ မခုထိ မတပ် တပ်သေးဘူး...
ဒီလိုနဲ့ပဲ ပျော်ပျော်ကြီး ဂင်းကြတာပေါ့..
ဟုတ်ပါ့ ဆရာရယ် .. အခု ကျွန်တော်လည်း အဲ့လို စ ဖြစ်တော့မယ် ... ကိုရီးယားကားတွေ အားကျလို့အခန်းများများတော့ မဆက်ပါနဲ့ နော် .. စောင့်နေပါ့မယ်.. ပျော်ရွှင်စွာ ဘလော့ဝင်နိုင်ပါစေလို့..
ဆရာလဲ ကိုးရီးယားကားဇာတ်လမ်းတွဲဖက်ကို လိုက်လာပြီ...ဖတ်ကောင်းကောင်းနဲ့အရှိန်ရမှ နောက်ဆက်တွဲမျှော်ဆိုတာမျိုး....။ ကိုရီးယားကားကို ပေရှည်လို့ ကြည့်ကိုမကြည့်တာ အဟဲ ကိုယ့်ဆရာစာကိုတော့ စောင့်ဖတ်မှဖြစ်မယ် ...ကိုယ်ကစာချစ်သူဖြစ်နေတာကိုး... ဒီပိုးတော့မသတ်နိုင်ပါ...။
ဆိုတော့ ရေးကြတာပေါ့ ကျွန်မဆို
သတ်ပုံမှားတဲ့ည အဲလေ jasmine
တက်ဂ်ကို အခုလို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ရေးပေးတာ ကျေးဇူး တကယ် တင်ပါတယ်၊ လောလောဆယ် အပြင်ရောက်နေလို့ အိမ်ပြန်ရောက်မှ ထပ်ဖတ်အုံးမယ်၊ ရေးပြီးကြောင်း တကူးတက လာပြောပြတာ ကျေးဇူးကမာပါ ...
ဦးဟန်ကြည် အခန်းဆက်တွေ ရေးဖြစ်လွန်းတာကြောင့် ကိုရီးယားပရိသတ်ရယ်လို့ အထင်တော်တွေ မလွဲကြပါနဲ့ ဘလော့ဂါအပေါင်းတို့ရယ်...
တကယ်တော့ အားရင်အားသလို စာရေးနေတာမို့ ဒီပို့စ် အစအဆုံးကို ရေးထားပြီးသားပါ...အစအဆုံးတင်လိုက်ရင် ဘလော့ဂါအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကို( ဖားထားမှ ) မျက်စိညောင်းအောင် နှိပ်စက်သလို ဖြစ်မှာစိုးပါတဲ့ ဦးဟန်ကြည်ရဲ့ စေတနာ၊ မေတ္တာတွေ ဗလပွကြောင့် သက်တောင့်သက်သာကလေး နားနားပြီးဖတ်ရအောင် အပိုင်းကလေးတွေခွဲပြီး တင်နေတာမို့ ကရုဏာရှေ့ထားပြီး နားလည်ပေးကြဖို့ အကြောင်းခံနဲ့ တောင်းပန်ပါရဲ့...
အဲဒီလိုမှ တောင်းပန်မထားရင်လည်း အခန်းဆက် များလွန်းလို့ ၀ိုင်းပို့ကြတဲ့ မေတ္တာတော်တွေနဲ့တင် ဗြောင်းဆန်ကုန်မှာ စိုးရပါရဲ့ ... ;D
သိဒယ်သိဒယ် အဲလိုလုပ်တော့မယ်ဆိုတာ အဟီးး ဝဋ်လည်မယ်နော်အကို .....ကိုကိုမောင်ပြောသလိုပဲ
အဲမှာ စတွေ့တာပဲ ညီမလေးလဲရေးမှာ ဘလော့ဒေးအတွက် အလွဲလေးတွေနဲ့ အမှတ်တရ...ဆိုပြိး :P:P
ကိုဟန်ကြည်က blog လောကမှာ ဒုက္ခရောက်တာ တော်တော် တူတယ်နော်...နောက်ဆက်တွဲမျှော်လျက်
ဘလော့ရွာလည်ရင်း ကိုဟန်ကြည်အိမ်ရှေ့အရောက်မှာ ဘလော့ဒေးအမှတ်တရပို့စ်တွေတာနဲ့ ကွန်မင့်ပေးခဲ့တာပါ။
ဘလောဂ့်နဲ့ ကိုးရီးယားကားနဲ့ များသွားလေပလား အာစရိး)
ဆရာတို့များ တဂ်ပို့တွေကို အခန်းဆက်လုပ်ထားပြီး လာဖတ်သူတွေကို လည်ပင်းရှည်အောင် ပြုစားနေတာ။
ပျော်ပျော်ပါးပါး စာတွေ အများကြီးဆက်ရေးသွားနိုင်ပါစေ ဆရာဟန်ရေ..
မလေး ဒီပိုစ်ရေးရင် မဆက်နိုင်လို့ ကိုဟန်ကြည့်စာဖတ်ပြီး နည်းနည်း ပြန်အားတက်လို့ ဆက်ရေးလိုက်ဦးမယ်..
စန်းထွန်းလည်း ဦးဟန်ကြည်လိုပဲ ကိုယ့်ရေးတဲ့စာတွေ ကိုယ့်ဘာသာပြန်ဖတ်ပြီး နေ့ စဉ်မှတ်တမ်းရေးတဲ့အကျင့်ကို ဘလော့ပေါ်တင်လိုက်သလို ခံစားရပြီး ကိုယ့်ပီတိလေးနဲ့ ကို ကျေကျေနပ်နပ် ဖြစ်လို့ နေတာ...း)
ကျွန်တော့်မလဲ ကိုအောင်က ရေးခိုင်းထားပြန်တယ်။
ဒီလိုပါပဲလေ၊ အားလုံးကတော့ 
ဘလော့ ရွာကြီးထဲကို ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ 
ရောက်လာကြပေမယ့်“ တူ ”နေတဲ့ 
အချက်တစ်ခုကတော့စာရေးချင်နေခြင်း
ဦးဟန်ကြည်ရဲ့ ဘလော့ဂ်ဒေးကနေ ဗဟုသုတတွေ ယူသွားပါတယ်။ ဆက်ရန်လေးကို ဆက်ဖတ်ပြီးမှ ကွန်မန့်ထပ်ပေးတော့မယ်နော်။
၂ ကို ဖတ်ပြီးမှ ၁ ကို ပြန်ဖတ်ရတော့ ဆရာရေ။
ဆရာဟန့် အတွေးစလေးတွေ.. ဆက်ဆွဲထုတ်သွား၏။
ခုမှရောက်ဖြစ်လို့ ချစ်စရာ ဘလော့ဂ်ရွာအကြောင်း အခန်း ၂ ဆက်ဖတ်လိုက်ပါအုံးမယ်။
မီးရထားတွဲတွေလို တတွဲပြီးတတွဲချိတ်မယ့် တဂ်ပို့စ်ပဲ။ ရေးတတ်ပါပေတယ်ဆရာရယ်။း)))